Big City Small World (Series2Episode9– New Year’s Resolutions) - Myanmar Network
Big City Small World (Series2Episode9– New Year’s Resolutions)
Posted by Forum Moderator2on January 25, 2013 at 16:14 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series2Episode9– New Year’s Resolutions (အတွဲ-၂၊ အခန်း(၉)နှစ်သစ် သန္ဒိဌာန်)
Series2Episode9- New Year's Resolutions ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Everyone is talking about their New Year's resolutions but why does Carlos feel so shy about mentioning his?
(လူတိုင်းက နှစ်သစ်အတွက် သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြောနေကြပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဘာလို့များ ကားလို့(ခ)က သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြောဖို့ရာ ရှက်နေတာလဲ?)
Johnny: Happy New Year!
Fadi: Stop, please! Enough New Year!
ကျေးဇူးပြုပြီး တော်ပါတော့။ နှစ်သစ်လုံလောက်ပါပြီ။
Johnny: It’s the first time I’ve seen you this year! You’re supposed to say ‘Happy New Year!’
ဒီနှစ်မှာ မင်းကို ဒါပထမဆုံးတွေ့တာလေ။ အဲဒီအခါမှာ ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ပြောရတာ
Fadi: OK,OK... Happy New Year to you too, then!
အေးပါ၊ အေးပါ…ဒါဆိုရင် မင်းအတွက်လည်း ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။
Johnny: It will be Chinese New Year soon – then we can do it all again!
မကြာခင် တရုတ်နှစ်ကူး ရောက်တော့မယ်၊ အဲဒီအခါကျရင်လည်း ငါတို့အစအဆုံး ထပ်လုပ်ကြတာပေါ့။
Fadi: Fine, OK, let’s wait until then, though, eh?
ကောင်းပါပြီ၊ ဒါပေမဲ့ အဒီအထိစောင့်လိုက်ရအောင်လားဟင်
Fadi /Johnny: Hi!
Magda: Happy New Year!
Fadi: Oh, please!
Magda: I’m only trying to be friendly...
ကျွန်မက ခင်မင်မှုကို ဖေါ်ပြရုံသက်သက်ပါ။
Fadi: Yeah, sure, sorry... Can we think about something else now please?
ဒါပေါ့ ဟုတ်တာပေါ့…တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါဆို အခု ကျေးဇူးပြုပြီး တခြားအကြောင်းပြောလို့ရမလား။
Magda: Have you made any New Year’s resolutions?
နှစ်သစ်အတွက် သန္ဒိဋ္ဌာန်တွေ ချပြီးကြပြီလား?
Johnny: New Year’s what?
Magda: New Year’s resolutions. Olivia told me about it - at the beginning of the year, you should decide to do something, and do it all year.
နှစ်သစ်အတွက် သန္ဒိဋ္ဌာန်တွေလေ။ အော်လီဗီယာက ကျွန်မကို ပြောပြထားတယ်။ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ အစမှာ တစ်ခုခုကို လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရတယ်တဲ့၊ ပြီးရင် အဲဒါကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ရတယ်။
Johnny: What kind of thing?
Fadi: Something like stop smoking, or go to the gym every day, or study more... ဆေးလိပ်ဖြတ်တာလိုမျိုး၊ ဒါမှ မဟုတ် အားကစားရုံကို နေ့တိုင်းသွားတာ၊ ဒါမှ မဟုတ် စာပိုကျက်တာမျိုး…
All: Hi Olivia! Hey! Hello!
အော်လီဗီယာရေ ဟိုင်း၊ ဟေး၊ ဟယ်လို
Olivia: Hmmph. Tony – could I havealarge coffee please? Make it extra strong!
ဟင်း……တိုနီရေ ကျွန်မကို ကော်ဖီအကြီးတစ်ခွက်ပေးပါ။ အထူးပြင်းပြင်းလေးလုပ်ပေးပါ။
Fadi: Looks like someone’s havingabad day!
တစ်ယောက်ယောက်တော့ အဆင်မပြေတဲ့နေ့နဲ့ ကြုံတွေ့နေရပြီ။
Olivia: Oh shut up Fadi!
ဟေ့ ဖာဒီ ပါးစပ်ပိတ်ထား
Magda: What’s up, Olivia?
Olivia: My website isn’t working properly. I need to fix it.
ကျွန်မရဲ့ ၀က်(ဘ)ဆိုက်(ဒ)ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ဘူး။ အဲဒါကို ပြင်ဖို့လိုတယ်။
Fadi: Here’s the right man to help you!
မင်းကို ကူညီဖို့ သင့်တော်တဲ့သူ ဒီမှာရှိတယ်။
Harry: Hello there! Are you talking about me?
Olivia: I’ve got problems with my website again...
ကျွန်မရဲ့ ၀က်(ဘ)ဆိုက်(ဒ)မှာ ပြဿနာတွေရှိနေပြန်ပြီ။
Harry: I told you I should have set it up the first time! You should have asked me!
ငါပြောသားပဲ၊ အစကတည်းက ငါပဲ ဆင်ခဲ့ရမှာ။ နင် ငါ့ကို တောင်းဆိုခဲ့ရမှာ။
Olivia: OK, OK... you were right...
.အေးပါ..အေးပါ ရှင် မှန်ပါတယ်။
Harry: So what’s the problem?
ကဲ ဒါဆိုရင် ပြဿနာက ဘာလဲ?
Olivia: The online sales page doesn’t work. People can’t buy my shoes!
အွန်လိုင်း အရောင်းစာမျက်နှာက အလုပ်မလုပ်ဘူး။ အဒါကျွန်မရဲ့ ဖိနပ်တွေကို လူတွေ ၀ယ်လို့မရဘူး။
Harry: I’m sure I can help fix it.
ဒါကို ငါ ပြင်နိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
Olivia: Go on then. Come over to my flat tonight, and we’ll havealook.
ဒါဆို လုပ်လိုက်လေ။ ဒီည ကျွန်မရဲ့တိုက်ခန်းကို လာခဲ့ပြီ၊းတို့နှစ်ယောက် ကြည့်ကြတာပေါ့။
Bindyu: Oh, sorry Olivia. I’m not sure he can come to your flat tonight.
အော် စိတ်မကောင်းပါဘူး အော်လီဗီယာ ဒီညသူ မင်းအခန်းကိုလာနိုင်မယ် မထင်ဘူး။
Harry: Yeah, I can. I’m not busy tonight.
အင်း၊ ငါ လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီည ငါ အလုပ်မရှိဘူး။
Bindyu: I thought we were going to the cinema?
ကျွန်မကတော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ရုပ်ရှင်သွားကြမယ်လို့ ထင်နေတာ မဟုတ်ဘူးလား?
Harry: Were we? Sorry, I didn’t know. I’d like to help Olivia, if I can...
ဟုတ်လား တောင်းပန်ပါတယ်။ ငါ မသိလိုက်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ငါအော်လီဖီယာကို ကူညီချင်ပါတယ်။
Olivia: Oh, listen Harry... don’t worry if you can’t come and help.
ဒီမှာ ဟယ်ရီ ရှင်လာပြီး မကူညီနိုင်လဲ စိတ်မပူပါနဲ့
Harry: No. I’ll come. I love websites – you know!
ဟင့်အင်း ငါလာမှာပါ။ ငါ ၀က်(ဘ)ဆိုက်(ဒ)တွေကို သဘောကျတာလည်း နင်လည်းအသိသားနဲ့
Johnny: Here’s another one of our friends... Thank goodness for that... ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေထဲက နောက်တစ်ယောက်လာပြန်ပြီဟေ့ တော်ပါသေးရဲ့။
All: Hello Carlos!
Carlos: Hello there!
Magda: We were talking about New Year’s resolutions. What’s yours?
ကျွန်မတို့က နှစ်သစ်သန္ဒိဌာန်တွေအကြောင်း ပြောနေတာ၊ ရှင့်ရဲ့ သန္ဒိဌာန်ကရောဘာလဲ
Carlos: New Year’s what?
Magda: New Year’s resolution - at the beginning of the year, you should decide to do something, and do it all year.
နှစ်သစ်သန္ဒိဌာန်၊ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ အစမှာ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်။ ပြီးတော့ ချထားတဲ့အတိုင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ရမယ်။
Carlos: Oh, I see... well, I want to beachef...
အော် သဘောပေါက်ပြီ။ အေး ငါကတော့ စားဖိုမှူးဖြစ်ချင်တာ
Fadi: We know that, it’s not new.
အဲဒါ ငါတို့ သိပြီးသားလေ၊ ဒါ အသစ်အဆန်းမှ မဟုတ်ပဲ၊
Johnny: It has to be something new!
Magda: Yes – something you want to do this year!
ဟုတ်တယ်၊ ဒီနှစ်မှာ မင်းလုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုပေါ့
Carlos: Oh. OK... I see, well... let me think... something I want to do this year... I know, I want to ask Sarah out onadate!
အော် - ကောင်းပြီ၊ နားလည်ပြီ၊ စဉ်းစားပါရစေဦး။ ဒီနှစ်မှာ ငါလုပ်ချင်တဲ့ အရာတစ်ခုခု သိပြီး။ ဆာရာကို ဒိတ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်တယ်။
Magda: Oh... well... it looks like you haveachance right now, Carlos!
အေးလေ အခုပဲ ရှင့်မှာ အခွင့်အရေးရတော့မယ့်ပုံပဲ ကားလို့(ခ)ရေ။
Sarah: Hello everyone! Were you talking about me?
အားလုံး ဟယ်လို။ ရှင်တို့ ကျွန်မအကြောင်း ပြောနေကြတာလား?။
Carlos: Well, no, erm yes, I mean...
အင်း မဟုတ်ဘူး၊ အာ.. ဟုတ်တယ်၊ ငါပြောချင်တာက….
Magda: Go on, Carlos!
ဆက်ပြောလေ ကားလို့ (ခ)
Fadi: Carlos has gotaquestion to ask you...
မင်းကို ကားလို့(ခ)က မေးစရာရှိလို့
Sarah: Oh, yes?
Carlos: Oh, yes, erm...well...I was wondering if...erm..
အင်း ဟုတ်တယ်၊ အဲ ..ငါ စဉ်းစားနေတာက တကယ်လို့…အဲ
Carlos: Yes, if you’d like to...erm... I don’t know... perhaps... erm... go out some time?
ဟုတ်တယ်၊ တကယ်လို့ နင်သာ သဘောကျမယ်ဆိုရင် အင်း ….. ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် …….အင်း….. တချိန်ချိန်မှာ ချိန်းပြီးအတူတူ ထွက်လည်ကြရအောင်။
Sarah: Go out with you?
Carlos: Well, yeah, I mean, if you want to...
Sarah: Oh, well... erm... what I think is...
Permalink Reply by sikedeveechan on May 4, 2013 at 17:08
Permalink Reply by thanthansoe on May 5, 2013 at 11:24
Permalink Reply by myintzawthan on May 5, 2013 at 13:02
Permalink Reply by Phyo Pyah Soe on January 14, 2015 at 14:50
Big City Small World (Series2Episod 3) MP3 can't be download. Please help